Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): January 2015
Masat shadaw mung hkum sit. Htingbu Jan hpe mung hkum Marit.
at 1/30/2015 11:33:00 AM
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သော့ချက်ကချင်စကားပုံ တစ်ခု
Masat shadaw mung hkum sit.
Htingbu Jan hpe mung hkum Marit.
ဘာဆိုင်လို့လည်း ခင်ဗျားက ပြောမယ်...
ဒီကချင် စကားပုံက ယနေ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို မီးမောင်းထိုးပြနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းရဲ့မြေထဲကို ချဉ်းနင်းကျူးကျော်လေလေ အိမ်နီးချင်းဇနီး ချောမောလှပတာကို တပ်မက်လေလေ ဖြစ်လာတယ်။ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေထဲကို အစိုးရစစ်တပ် ချဉ်းနင်းကျူးကျော်လေလေ တိုင်းရင်းသား သမီးပျိုများကို ကျွန်တော်တို့ ဆုံးရှုံးလေလေ ဖြစ်လာရတာ သက်သေသာဓက အတိအကျပါ။
ဒါတင်မက ဒေသခံပိုင် နယ်မြေလည်းဆုံးရှုံးရသလို သဘာဝအရင်းအမြစ်များလည်း ဆုံးရှုံးရသည်သာမက ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ လုံခြံမှု၊ လွတ်လပ်မှု ၊ လူ့အခွင့်အရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးမှု ပိုမိုကြီးထွား လာနေပါတယ်။
အကျိုးဆက်က တိုင်းရင်းသားများက ဗမာလူမျိုး ၉၉% ပါဝင်နေတဲ့ အစိုးရစစ်တပ်နဲ့တကွ ဗမာလူမျိုးများကို ယုံကြည်မှု လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားခဲ့တာပါပဲ။
ဒီကိစ္စမှာ အစိုးရစစ်တပ်က ဗမာလူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုဘူးလို့တော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ "ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာလူမျိုး" ရယ်လို့ ဝင့်ကြွားဂုဏ်ယူပြောဆိုတတ်တဲ့စကားကို ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူများစု ဗမာလူမျိုးအာလုံးနီးပါး ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို လူမျိုးအမည်နဲ့တကွ ပိုင်ဆိုင်ရယူလိုက်တာပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဒါ့ကြောင့် ဗမာလူမျိုး ၉၉% ပါဝင်နေတဲ့ အစိုးရစစ်တပ်ဟာ ဗမာလူမျိုးများကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ကောင်းတာ ကိုပဲယူပြီး ဆိုးတာကျတော့ ချန်ထားလို့ မရပါဘူး။
စကားပုံကို ပြန်ဆက်ရရင် ကိုယ့်ရဲ့မြေမှတ်တိုင်ကို တစ်ပါးသူပိုင်မြေထဲ မရွှေ့မချင်းတော့ အိမ်နီးချင်းနဲ့ ပြဿနာကင်းရှင်းနေမှာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာ ကျူးကျော်လာတာကို ရေငုံနှုတ်ဆိတ် ခေါင်းငုံ့ခံနေမှာမဟုတ်ပဲ တရားမျှတမှုမရမချင်း (သို့မဟုတ်)ကျူးကျော်သူက ပြန်လည်မဆုတ်ခွါမချင်းတော့ ခုခံတိုက်ခိုက်နေမှာပဲ ဆိုတဲ့ နိယာမကို စကားပုံက သွန်သင်နေပါတယ်။
ကိုယ်က စလို့ ကျူးကျော်တယ်၊ သူများ သားမယားကိုလည်း စော်ကားခဲ့တယ်၊ အိမ်နီးချင်းရဲ့ စည်းစိမ်အပြောင်လည်း သိမ်းယူပြီးကာမှ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဆို တစ်ဖက်က မယုံကြည်ခါမှ "တို့က ရွှေလက်နဲ့ ခေါ်တယ် မလာမှတော့ ဘူးလက်ပဲပေးတာပေါ့" ဆိုတဲ့ ကျူးကျော်သူစကားက တိုင်းရင်းသားများရင်ကို ဆောင့်ကန်လိုက်တာပါ။
တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဆိုချင်ရင် ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာပြန်ပါ။ ကျူးကျော်စိုက်ထူထားတဲ့ မြေမှတ်တိုင်ကို နဂိုမူလအတိုင်း ထားပါ။
တိုင်းရင်းသားများဘက်ကတော့ ဘိုးဘေးတို့သွန်သင်ထားတဲ့ စကားကို သားစဉ်မြေးဆက် မြေဝယ်မကျ နားထောင်တတ်သူများဖြစ်တာကြောင့် အသင်လူမျိုး စိုးရိမ်စရာမလို လို့ပဲ ပြောချင်မိပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား မြေမှတ်တိုင်များ နဂိုမူလအတိုင်း ရှိပါစေသား။
at 1/30/2015 10:45:00 AM
Post by Kagabu Rvwangce.
တရုတ်ပြည်က ရဝမ် လူမျိုးတွေပါ နားဆင်ကြပါ။
ဗမာလူမျိုးစု တပ်မတော်ကို ကမ္ဘာက မုဒိန်းတပ်မတော် အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပြီ
Post by Kham Hla.
at 1/27/2015 06:07:00 AM
UNFC ၏ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်မူဝါဒ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ
at 1/27/2015 01:51:00 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC)မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်တွင် တွင် ယနေ့ညနေပိုင်း တွေ့ဆုံပြီးနောက် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုင်းရင်းသား အရေးအတွက် အသိသက်သေအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ၀ိုင်းဝန်းကူညီသူအနေဖြင့်သော်လည်း အမြဲတမ်းကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်နေကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လိုအပ်ကြောင်း ဦးနိုင်ဟံသာက ပြောဆိုသည်။
အခြေခံဥပဒေ နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် UNFC သဘောထား မကွဲလွဲကြောင်း၊ အဓိကမှာ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု စနစ် တရပ် ပေါ်ထွန်းရေး ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုသည်။
at 1/27/2015 01:22:00 AM
at 1/27/2015 01:11:00 AM
Condolence Prayer Service of Tang Bau Hkawn Nan Tsin and Maran Lu Ra.
at 1/26/2015 09:25:00 PM
at 1/26/2015 09:17:00 PM
Post by Labang Aung Mai.